Shiinaha Auto Ac kombaresarada iyo Warshadda Warshadaha Warshadaha ee Toyota Passo / Toyota Corolla / Toyota Terios soo saarayaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha | Hollysen
Compressor -ka Auto Ac iyo Warshadda Warshadaha ee Laydhka ee Toyota Passo / Toyota Corolla / Toyota Terios
Kombaresarada vane Rotary, oo sidoo kale loo yaqaan kombaresarada xoqan, oo ah nooca kombaresarada Rotary. Silsiladda qalabka kombiyuutarka ee rookaha ah waxay leedahay laba nooc: wareeg iyo oval. Kursiga roogga wareega oo leh dhululubo wareegsan, masaafada ka baxsan xarunta dhidibka ugu weyn ee rotor-ka iyo bartamaha dhululubada ayaa ka dhigaysa rotor-ka meel u dhow meesha laga soo galo hawada iyo soo-baxa dusha sare ee dhululubka.
KOOBAN CUSUB AUTO AC
Kombaresarada vane Rotary, oo sidoo kale loo yaqaan kombaresarada xoqan, oo ah nooca kombaresarada Rotary. Silsiladda qalabka kombiyuutarka ee rookaha ah waxay leedahay laba nooc: wareeg iyo oval. Kursiga roogga wareega oo leh dhululubo wareegsan, masaafada ka baxsan xarunta dhidibka ugu weyn ee rotor-ka iyo bartamaha dhululubada ayaa ka dhigaysa rotor-ka meel u dhow meesha laga soo galo hawada iyo soo-baxa dusha sare ee dhululubka. Qalabka kombiyuutarka ee rookaha leh oo leh dhululubo oval, dhidibka ugu weyn ee rotor -ku wuxuu ku beegan yahay xarunta joometeriga ee ellipse -ka, iyo rotor -ku wuxuu u dhow yahay dusha sare ee labada faas ee gaagaaban ee ellipse -ka. Sidan, xiriirka ka dhexeeya garbaha rotor -ka iyo dhidibka ugu weyn ayaa u kala qaybiya dhululubo dhowr meelood. Marka usha ugu weyn ay kaxayso rotor -ka si uu u wareego hal wareeg, mugga meelahan ayaa sii ballaadhi doona, hoos u dhigi doona, kuna noqon doona eber. Si la mid ah, uumiga qaboojiyaha ah ee meelahaan ku wareegsan ayaa neefsada iyo qiiqa.
Kursiga roogga rookaha leh oo leh dhululubo wareegsan, impeller -ka ayaa si aad ah loogu rakibay, iyo wareegga dibedda ee guluubka ayaa si aad ah ugu dhegan inta u dhexeysa daloollada iyo daloollada dusha sare ee dhululuubka. Dhulululaha elliptical -ka, dhidibka ugu weyn ee rotor -ku wuxuu la jaan qaadaa bartamaha ellipse -ka. Garbaha ku jira rotor -ka iyo xariiqa xiriirka ee u dhexeeya ayaa dhululubka u kala qeybinaya dhowr meelood. Marka dhidibka ugu weyn uu kaxeeyo rotor-ka si uu u wareego hal wareeg, mugga meelahaan waxaa maraya isbeddel meerto ah oo ah “ballaarinta, yaraanshaha, iyo ku dhawaad ​​eber”, uumiga qaboojiyaha ee meelahaas ayaa sidoo kale maraya wareegga nuugidda-cadaadinta-qiiqa. Gaaska la cadaadiyey ayaa laga soo saaraa waalka cawska. Kumbiyuutarka rooga rogaha ma laha waalka wax lagu qaato, iyo sanduuqa dhagaxa leh ayaa dhammayn kara hawsha nuugista iyo cadaadinta qaboojiyaha. Dhululubada wareegsan, labada baladh ayaa dhululubka u qaybiya laba meelood. Mashiinka ugu weyn ayaa meerto hal wareeg ah, waxaa jira laba hab oo qiiqa, afarta baalalna waxay leeyihiin afar jeer. Markay baalalku sii bataan, waxaa yaraada garaaca wadnaha ee kombaresarada. Wixii dhululubo elliptical ah, afar baaldi ayaa u qaybiya dhululubka afar meelood. Dhidibka ugu weyn wuxuu isku rogaa hal wareeg waxaana jira afar hab -socod oo qiiqa. Sababtoo ah waalka qiiqa waxaa loogu talagalay meel u dhow xariiqa xiriirka, ku dhawaad ​​ma jirto mugga sifeynta ee kombaresarada weelka Rotary.
Nooca Qaybta: A/C Compressors
Cabbirka Sanduuqa: 250*220*200MM
Miisaanka alaabta: 5 ~ 6KG
Wakhtiga Bixinta: 20-40 Maalmood
Dammaanad: Dammaanad -qaad Mileage aan Xad lahayn oo 1 Sanno ah oo Bilaash ah
Baakadaha kartoonka caadiga ah ama xirxirka sanduuqa midabka caadada ah.
Hore: Ac Compressor Warshadaha Warshadaha ee Mazda CX3 / Mazda Demio / Mazda 3
Xiga: Kombiyuutarrada Hawo -qaboojiyaha Gawaarida iyo Golaha Qabashada ee Suzuki Wagon R / Suzuki Jimny / Alto
Compressor Auto Ac Waayo Honda N-BOX / Honda Brio ...
Ac kombaresarada Warshadaha Warshadaha Waayo Mazda CX3 ...
Nooca cusub ee AC Compressor oo leh Lidka Nissan ...
12V Auto A/C kombaresarada Warshadaha Warshadaha Waayo ...
12V Auto Ac kombaresarada Waayo Mitsubishi Colt / MI ...